लुकी लुकी आगजनी (फाेटाेफिचर) « Tulsipur Khabar
लुकी लुकी आगजनी (फाेटाेफिचर)
मकवानपुर । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी विप्लब समूहले यो वर्ष आव्हान गरेको चारवटै नेपाल बन्दको क्रममा सडक सवारीमा आगजनी गरेर मकवानपुरको थाहानगरलाई प्रभाव पारेको छ ।
उक्त पार्टीले पछिल्लो पटक सोमबार आह्वान गरेको बन्दको क्रममा थाहा नगरको वडा नं. १ कुलगाउँमा ट्रकमा आगजनी गरेको थियो । विहान करिव ४ बजेतिर ना ६ ख ८००७ नम्बरको आइचर गाडी जलाइएपछि थाहा नगरमा बन्दको प्रभाव देखिएको छ । यातायात ठप्प छ भने बजार, विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चलेका छैनन् ।
प्रहरीले रातभर गस्ती गर्नुका साथै राती चलेका सवारी साधनहरुलाई स्कर्टिङ गरी गन्तव्यतर्फ पु-याएको भए पनि विहानीपख त्रिभुवन राजपथमा धादिङको नौविसेबाट हेटौंडाको लागि चलिरहेको उक्त ट्रक कुलगाउँ पुग्दा जलाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरिक्षक यज्ञप्रसाद भटराईले सोमबार विहान थाहानगरमा ट्रक जलाइएको अवस्थामा भेटिएको पुष्टि गरेका छन् ।
सोमबारको बन्दसम्म यो आर्थिक वर्षमा विप्लब समूहले ४ पटक नेपाल बन्द आह्वान गर्दा चारैपटक थाहा नगरमा सडक सवारीमा आगजनी भएको छ । उक्त समूहले पार्टी प्रवक्ता खड्कप्रसाद विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) पक्राउविरुद्ध ३० साउनमा आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा थाहानगरकै टिस्टुङमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरिने नयाँ बसमा आगो लगाएका थिए ।
त्यसैगरी ओली सरकारले पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको विरोधमा ३० फागुनमा गरेको बन्दमा थाहाको नयाँगाउँमा ना ५ ख ७४११ नम्बरको हेभी इक्वीपमेन्ट बोक्ने ट्रेलर गाडीमा आगजनी गरेका थिए । सरकारले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेको भन्दै आह्वान गरिएको ५ बैशाखको नपाल बन्दको क्रममा उक्त समूहले थाहानगरकै सीमभन्ज्याङमा ना २ च ९०९४ नम्बरको बोलेरो पिकअप गाडी जलाएको थियो ।
बन्दैपिच्छे गाडीमा आगजनी हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा विप्लब समूहको बन्द सुन्नेविीत्तकै बन्दलाई सवारी साधनमाथि हुने आगजनीसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । बन्दको आह्वानसँगै सवारी आगजनीको घटना हुन थालेपछि प्रहरीले पनि पछिल्ला बन्दहरुमा विशेष निगरानी बढाएको थियो । चारवटै बन्दमा थाहा नगरको फरक फरक स्थानमा आगजनी भएको देखिएको छ ।
थाहानगरमा विप्लब समूहको अन्य राजनीतिक गतिविधि नदेखिए पनि बन्दको आह्वानसँगै सवारी साधनमाथि आगजनी हुन थालेपछि स्थानीय त्रसित हुन थालेका छन् । त्रासकै कारण विप्लब समूहले आह्वान गरेका सबै बन्दहरुले प्रभाव पार्दै आएको छ ।
विप्पल समूहले आह्वान गरेको यस अघिको दुईवटा नेपाल बन्दमा बन्दको अघिल्लो राती नै सवारीसाधनमाथि आगजनी भएको थियो । सोमबार र ३० साउनको बन्दमा भने बन्दकै दिन विहानीपख आगजनी भएको थियो ।
सोमबारको बन्दको क्रममा विप्लब समूहका कार्यकर्ताहरुले हेटौंडा प्रवेश गर्ने उत्तरी नाका चौकीटोलमा ना ७ ख ९४९३ नं. को ट्रकमा आगजनी गरेका छन् । आगजनीसँग हेटौंडा बजारको मुख्य चोक बुद्धचोक नजिकै प्रेसर कुकर बम फेला परेको थियो । प्रेसरकुकर बम नेपाली सेनाको डिस्पोज गरेको छ। आगजनीपछि हेटौंडा बजार पनि ठप्प रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ १३ गते सोमवार